Antoky ny ho avy mamiratra ny fahaiza-misafidy mandritra ny fahatanorana | UNICEF Madagasikara
Antoky ny ho avy mamiratra ny fahaiza-misafidy mandritra ny fahatanorana
“Mihaino ireo torohevitra mahasoa ary mandray an-tànana ny hoavy”, io no teny filamatra noraisin’i Florentine hiatrehana ny olana misy marobe amin’ny maha-zatovovavy azy
22 Febroary 2020
Mila manao firaisana sy manambady haingana ianao amin’izay tsy mijaly lava isaky ny fadimbolana. Izany no torohevitry ny renibeko.
Florentine, 16 taona
Monina ao amin’ny kaominina Ifarantsa (faritra Anosy), any atsimon’i Madagasikara i Florentine ary taizan-drenibeny izy. NIfindra any amin’ny kaominina hafa manko ny ray aman-dreniny taona vitsy lasa izay ary indraindray ihany izy ireo vao mamangy azy. Mianatra any amin’ny sekoly ambaratonga faharoa, antsasakadiny miala eo an-traony i Florentine. Taona faha-7 izy izao.
Rehefa nanomboka tonga fadimbolana izy tamin’ny faha-12 taonay, dia matetika manaintaina azy hatrany ny kibony. Mba hampitsahatra ny fanaintainana, nanoro hevitra azy hiditra amin’ny firaisana ara-nofo ny renibeny. Gaga izy tamin’izany, ka lasa nanontany ny hevitr’i Odelette, izay tompon’andraikitra eo an-tànana. “Nandresy lahatra ahy tsy hieritreritra hafa-tsy ny fianarana i Odelette. Niaraka nandany amin’ny tobim-pahasalamana izahay avy eo. Nozahan’ilay mpitsabo aho ary nolazaina fa ara-dàlana tsara ny fahasalamako. Nomeny fanafody vitsivitsy manala fanaintainana fotsiny aho.” , hoy ny zatovovavy faly ery fa nahay nisafidy.
Tsy mora ny miaina ny fahatanorana indrindra ho an’ny zatovovavy, eto Madagasikara, indrindra any amin’ny faritra atsimo, “Matetika dia asain’ny ray aman-dreniny manambady aloha loatra ny zanany noho ny fomba” Hoy i Odelette, izay efa nahita tranga maro. Vitsy ny toerana ahafahan’ny tanora manontany hevitra sy manovo fahalalana momba ny fahasalamana ara-pananahana. Vokatra izany, 34,7%-n’ny zatovovavy 15 hatramin’ny 19 taona no efa nitondra vohoka.
Any amin’ny faritra Anosy, tolotra ara-pahasalamana maro ho an’ny tanora no napetraky ny fanjakana miaraka amin’ny UNICEF sy ny mpiara-miasa toy ny Agence de coopération internationale coréenne (KOICA). Hita eny anivon’ny fiarahamonina sy any amin’ny tobim-pahasalamana ireo tolotra ireo, mba hahafahan’ny tanora mandray an-tànana amin’ny fomba tsara kokoa ny ara-pananahana. Tamin’ny taona 2018, tanora miisa 20 400, ao anatin’izany i Florentine, no nahazo torohevitra sy tantsoroka tamina tobim-pahasalamana sakaizan’ny tanora any amin’ny faritra Anosy.
Maniry hanohy fianarana hatrany amin’ny ambaratonga ambony i Florentine. “ Mpampianatra no asa tiako hatao any aoriana mba hanabe ny ankizy aty aminay. Hampitaiko amin’ny zandriko lahy sy vavy ihany koa ny fahalalana izay efa azoko mba hafahany’izy ireo mandray an-tànana ny hoaviny.” Hoy izy.
Fahasalamana sy fivoaran’ny zatovo sy ny tanora